खानेपानीको योजना कितावमै सिमित – Tanahun Khabar
खानेपानीको योजना कितावमै सिमित
हरि खरेल/ दुलेगौडा । चालु आर्थिक बर्षमा जिल्लाका शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न भन्दै ३० योजनाहरु सुचिकृत भएका छन् । नगरपालिकाद्धारा प्रकाशित गरिएको योजना पुस्तिकामा यतिका संख्यामा खानेपानीको योजनाहरु भएता पनि कार्यन्वयमा भन्ने जम्मा नौ योजना मात्र रहेका छन् ।
आर्थिक बर्षको आधा समय वितिसक्दा करोडौँ बजेट छुट्टिएता पनि योजनाको प्रभावकारि कार्यान्वयनमा भने सम्वन्धित पक्षले चासो दिएको पाइदैन । नगरले यस आर्थिक बर्षमा खानेपानीका लागि २ करोड रुपौया बजेट विनियोजन गरेको छ ।
हाल नगरभित्र वडा नं. २, ५, ६ र १२ मा केही खानेपानीका योजनाहरु कार्यन्वनमा रहेको योजना शाखा अधिकृत पुष्पराज गिरीले जानकारी दिए । गिरीका अनुसार नगरको वडा नं.२ मा स्थानथोक सोलार लिफ्टीङ्ग खानेपानी योजना र भुजिकोट सोलार लिफ्टीङ्ग खानेपानी योजना, वडा नं. ५ मा थर्पुटार खानेपानी योजना, झाक्रीथान नयागाउँ खानेपानी योजना, वडा नं. १२ मा खानेपानी योजना र वडा न. ६ मा खानेपानीका टुक्रे योजना अन्र्तगतका ३ वटा योजना कार्यन्वयनमा रहेको छन् ।
नगरको वडा नं. १० मा खानेपानीका लागि १० वटा योजनाहरु नगरसभाले पारित गरेता पनि अझपनि कुनै पनि कार्यन्वयनमा आएका छैन । वडामा ६ वटा योजना पाइप रहेको र बाँकी टंकी निर्माण जस्ता कामहरु रहेको वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए ।
वडाको प्राविधिकलाई कोरोना संक्रमण देखिएको कारणले योजनाहरुलाई अगाडि बढाउन नसकेको वडाध्यक्ष भण्डारीले बताएका छन् । “नगरले अहिले वडाको खानेपानीका लागि प्राविधिक खटाएको छ, र केही योजनाहरु सम्झैता भएका हुदाँ चाडै नै कार्यन्वयनमा लागु हुने छन् ।” वडाध्यक्ष बताए ।
बर्खाको समयमा गाउँमा खानेपानीको अभाव नभए पनि हिउँदमा मुहान सुक्ने समस्याका कारण धेरै समस्या भोग्नुपरेको रजस्थल टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष राम बहादुर रानाले जानकारी दिए ।
रानाले नगर र वडाको बजेटमा केही काम भएता पानिका लागि कुवा वा पधेरामा जानुपर्ने समस्या नहटेको गुनासो गरे । हाल वडाले पानीको लागि केही पहल गरेको हुदाँ स्थानियहरु खुसी रहेको बताए ।
वडाभित्र रहेका टोलमा बिशेष गरेर मुहानको समस्याका कारणले पानीको समस्या रहेको वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष दलबहादुर थापाले जानकारी दिए । यस बर्ष नगरको करिब २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोले गर्दा सोलार लिफ्टिङ्ग गरेर पानिको व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको बताए । अबको केही समय भित्र नै उक्त योजनाहरु सम्झैता गरेर कार्यन्वयन गर्ने बताए ।
फिरफिरेमा सामुहिक ल्होसार मनाइदै